Nanapa-kevitra ny hanohana ny kandida laharana faha-25, Marc Ravalomanana moa ny tenany, amin’izao fihodinana faharoa izao. Antony tsy hanohanako ny kandida laharana faha-13, hoy izy, dia satria fahavalon’ny fitsinjaram-pahefana. Mbola ao ilay mpanolotsaina malaza izay azo lazaina hoe “Grand Gourou” nahatonga ireo krizy teto amin’ny firenena. Rehefa miresaka hoe Norbert Lala Ratsirahonana isika dia krizy izay no dikany, hoy hatrany ny fanazavany. Izy no fototr’ireo fifanarahana tsy tanteraka rehetra toy ny tany Dakar tamin’ny taona 2002 sy ny tany Maputo tamin’ny 2009 ireny ohatra. Mbola dian-tanany ihany koa io lalàm-panorenana mampivangongo ny fahefana eo amin’ny filoham-pirenena tsy mety mahatafavoaka antsika amin’izao io. Aleo mifidy izay efa nilaza fa mpanangana fa tsy mpandrava, hoy hatrany Eliana Bezaza.